बिएण्डसीको पेट सिटी प्रयोग विहिन, मेशिन राखेको मासिक खर्च मात्रै ५० लाख
भाद्र ०७, २०७८ ०७:४१ मा प्रकाशित
झापास्थित बिएण्डसी मेडिकल कलेज एवं पूर्वाञ्चाल क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान मेशिन एक वर्षदेखि प्रयोग विहिन छ ।
क्यान्सर रोगको उपचारमा पिल्लरका रुपमा रहेको पेट स्क्यान मेशिन सञ्चालनका सम्बन्धमा ऐन नबन्दा बिएण्डसीको पेट स्क्यान मेशिन त्यत्तिकै थन्किएको हो । ७० करोडको लागतमा भित्र्याइएको यो मेशिन प्रयोग विहिन हुँदा अस्पतालको मासिक भार ५० लाखले बढेको छ । मेशिनलाई उपयुक्त वातावरणमा राख्नपर्ने भएकाले मासिक भार बढेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाइले जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अनुमतिमा मेशिन ल्याइएको तर मेशिन ल्याएपछि ऐन बनेको छैन भनेर प्रयोग गर्न नदिएको प्रसाइले बताउनुभयो । पेट सिटिले क्यान्सरको निदानदेखि यसको उपचारपश्चात शरीरमा क्यान्सर रहे/नरहेको पत्ता लाग्छ । यसका लागि न्यूक्लियर रेडियो (औषधि) आवश्यक पर्दछ जसले शरीरलाई स्क्यान गरि रोग पत्ता लगाउँछ । पेट सिटि गर्न आवश्यक पर्ने रेडियोको लागि आइसोटोप्ज चाहिन्छ तर यो ल्याउने सम्बन्धमा ऐन नबन्दा भएको मेशिनसमेत प्रयोग विहिन भएको छ ।
ऐन नबनेपनि काठमाडौंमा निजी स्तरबाट २ स्थानमा पेट सिटिस्क्यान मेशिन ल्याएर प्रयोग भइरहेको छ तर, कोभिडका कारण भारतबाट आइसोटोप्ज ल्याउन नपाउँदा अहिले चलिरहेका ती २ वटै सिटिस्क्यान बन्द छन् । जसका कारण क्यान्सरका बिरामी लाखौं खर्चेर भारत जानपर्ने बाध्यता छ भने पैसा नभएका बिरामीहरु उपचार नगरी घरमा नै बसिरहेको अवस्था छ ।
भारतमा पेट स्क्यान गर्न जाँदा करीब ५ लाख खर्च हुने तर बिएण्डसीले ६० हजारमै उक्त परीक्षण गर्ने प्रसाइले बताउनुभयो । पहिला ल्याउनेले लेराएर चलाइहाले तर हाम्रो पालामा ऐन बनेको छैन भनेर अड्काइएको छ प्रसाइले सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो, बिरामी उपचारलाई दिेश जाहोस् भनेको हो ?
‘भइरहेको मेशिन प्रयोग विहिन छ तर बिरामीहरु लाखौं खर्चेर भारत गइरहेका छन् । उपचारका लागि त्यहाँ पुगेका कतिपय बिरामीहरुको कोभिडको कारण मृत्युसमेत भइरहेको सुनेको छु, ’ प्रसाइले भन्नुभयो ।
करिब ७० करोडमा खरिद गरिएको उपकरणमा २४ घण्टा वातावरणनुकूलतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । उपकरण सञ्चालन नआउँदा मासिक ५० लाख खर्च भइरहेको छ । उपकरण सञ्चालनका लागि समेत न्यूक्लियर मेडिसिन चिकित्सकसमेत अस्पतालले एक वर्षदेखि तलब खुवाएर राखिसकेको छ । उपकरण सञ्चालन नभएपछि त्यतिकै ती चिकित्सक बसिरहेका छन् ।
क्यान्सर एक जटिल रोग हो । थाहा नपाइ यो रोग एउटा अंगबाट अर्का अंगसम्म फैलिसकेको हुन्छ । शरीरको कुन भागमा कति फैलिसकेको हुन्छ त्यसको पत्तो हुदैन । जहाँ ट्युमर हुन्छ त्यसको वरीपरीसम्म फैलिन्छ । कहिलेकाँही अल्ट्रासाउण्ड र सिटिस्क्यान गर्दा क्यान्सरको फैलावट थाहा हुँदैन यसका लागि पेट स्क्यान गर्नैपर्छ । पेट स्क्यानलाई क्यान्सरका बिरामी हेर्ने अंकोलोजिष्टको आँखाको रुपमा पनि लिइन्छ ।
क्यान्सरको फैलावटलाई पत्ता लगाउन पेट सिटि स्क्यान अत्यन्तै महत्वपूर्ण उपचार विधि हो । पेट स्क्यान भएन भने पनि क्यान्सरको उपचार त हुन्छ तर बिरामीको गुणस्तरीय उपचार भने हुदैन । नेपालमा वर्षेनी ३० देखि ३५ हजार क्यान्सरको नयाँ बिरामी थपिने गरेको तथ्यांक छ । रोग निदानभएका मध्ये १५ देखि २० हजार बिरामीको मृत्यु हुने गरेको अस्पतालहरुको तथ्यांकले देखाएको छ । क्यान्सर उपचारमा पेट स्क्यान किन महत्वपूर्ण छ भनेर पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. विरेन्द्रकुमार यादवलाई सोधेका छौ ।
पेट सिटिस्क्यान किन ?
रोगको उपचारको निदान गर्न । क्यान्सर कहाँनिर छ ? यसको फैलावट कहाँसम्म छ त्यो पत्ता लगाउन ।
क्यान्सरको स्टेज थाहा पाउन
क्यान्सरको ४ वटा स्टेज हुन्छ । पहिलो र दोस्रो अवस्थालाई सुरुवातीको रुपमा लिइन्छ जुन उपचार भए पूर्ण रुपमा निको हुन्छ । तेस्रो र चौथो अवस्थालाई एडभान्स भनिन्छ जसको उपचार गर्दा पूर्ण रुपमा निको हुँदैन ।
त्यसैले पेट स्क्यानले क्यान्सरले स्टेज पत्ता लगाउन सहयोग पुर्याउँछ । जस्तो फोक्सोको क्यान्सर भएको छ तर बिरामीको हड्डी दुखेको छ, खोकी लागिरहेको छ भने क्यान्सर अन्य भागमा पनि सरेको छकी भनेर हामीले जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि पेट स्क्यान गर्नै पर्छ ।
क्यान्सरको स्टेज पत्ता लागेपछि औषधिले काम गरिरहेको छैन पत्ता लगाउन ।
पेट स्क्यानले क्यान्सरको स्टेज पत्ता लगोपछि बिरामीलाई सोही अनुसार उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । मानौ कोही बिरामीले किमो लिइरहेको छ भने उक्त किमोले काम गरिरहेको छ की छैन भनेरपनि पेट स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ । औषधिले क्यान्सरको सेल नष्ट गर्यो की गरेन त्यो हेर्न पनि पेटस्क्यान गर्नुपर्छ ।
क्यान्सर भएर उपचार गरेपछि फलोअपको जाँच पेट स्क्यानबाटै गर्नपर्छ । बिरामीको सर्जरी पछि शरीरमा क्यान्सर छ कि छैन भनेर हेर्न यो प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
सबै क्यान्सरका बिरामीले पेट स्क्यान गर्नैपर्छ ?
सबै क्यान्सरका बिरामीलाई पेटस्क्यान गर्न पर्दैन । तर करीब ८० प्रतिशत बिरामीलाई पेट स्क्यान गर्नै पर्ने हुन्छ । जस्तो स्टेज १ का स्तन क्यान्सरका बिरामीलाई यो गर्न पर्दैन भने फोक्सो क्यान्सरको बिरामी जसको स्टेज १ मै पेट स्क्यान गर्नुपर्छ ।
पूर्वाञ्चाल क्यान्सर अस्पताल